Akukho zithintelo: IRashiya iphinda iqale iinqwelomoya ngeRiphabhlikhi yaseDominican, kwiRiphabhlikhi yaseCzech naseMzantsi Korea
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Akukho zithintelo: IRashiya iphinda iqale iinqwelomoya ngeRiphabhlikhi yaseDominican, kwiRiphabhlikhi yaseCzech naseMzantsi Korea
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Iindaba zaseMzantsi Korea • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngaphandle kokurhoxiswa kwazo zonke izithintelo, okwangoku akukho nqwelo moya yaseRussia okanye yamanye amazwe ethe yanika ingxelo ngeenqwelo moya ezongezelelweyo ezivela eRashiya zisiya kula mazwe.
IRiphabhlikhi yaseDominican, iRiphabhlikhi yaseCzech kunye noMzantsi Korea ngawona mazwe mathathu okuqala, apho iRussia iqale ngokutsha iinqwelomoya.
Uhambo oluya ePrague lwenziwa yiRossiya yaseSt. Petersburg, kunye neAeroflot kunye neCzech Airlines zaseMoscow.
Iindiza eziya kwiRiphabhlikhi yaseDominican zavulwa ngo-Agasti, kuphela yiAzur Air eqhuba iinqwelomoya apho.
Abasemagunyeni baseRussia abasebenza kwezokuhamba ngenqwelomoya kunye ne-anti-coronavirus centre babhengeza ukuba zonke izithintelo ezikhoyo kwiinqwelomoya eziya eDominican Republic, South Korea nase Czech Republic ziye zaphakanyiswa ukuqala ngolwesiHlanu, Agasti 27.
IRiphabhlikhi yaseDominican, iRiphabhlikhi yaseCzech kunye noMzantsi Korea ngawona mazwe mathathu okuqala, apho iRussia iphinde yaqala khona ukubhabha ngenqwelomoya ukusukela oko kwaqaliswa ukubekwa phakathi kobhubhane, kunye namazwe aseleyo asagqunywe yindlela yokulungiselela isabelo sendiza. Ngapha koko, iziko lithathe isigqibo sokunyusa inani lezabelo kwiinqwelomoya eziya rhoqo eYiphutha ukuqala ngolwesiHlanu.
Ukuza kuthi ga ngoku akukho mphathi-moya waseRussia okanye welinye ilizwe uxele iinqwelomoya ezongezelelweyo ezivulekileyo kula mazwe. Iindiza eziya ePrague zenziwa Rossiya Petersburg, kunye Aeroflot kunye neenqwelo moya zaseCzech ezivela eMoscow. IRiphabhlikhi yaseCzech ihlala ivaliwe kubakhenkethi njengabakhweli kuphela abanobumi okanye imvume yokuhlala, okanye abo beza kwizifundo okanye unyango banokungena kweli lizwe.
UMzantsi Korea nawo uvaliwe ngokupheleleyo kubakhenkethi. Bonke abo bangena kweli lizwe (ngabemi kuphela okanye abakhweli abaneemvume zokuhlala) baya kucelwa ukuba babekelwe bodwa iintsuku ezili-14. Ngapha koko, ku-Epreli ophelileyo ilizwe liyekile ukuhamba ngaphandle kwe-visa ngaphandle kweRussia kunye neevisa ezimisiweyo ezikhutshiweyo. Kuphela Aeroflot owenza moya kweli lizwe.
Iindiza eziya kwiRiphabhlikhi yaseDominican zavulwa ngo-Agasti, kuphela yiAzur Air eqhuba iinqwelomoya apho. I-Aeroflot ikwabhengeze umdla wayo kwindawo oya kuyo, nangona inkampani ingekabhengezi owona mhla wokuqala kweenqwelo moya.